Valverde oo ka hadlay xidigaha kooxda Barcelona ee seegi doona kulanka habeen dambe Tottenham – Gool FM
Dajiye December 10, 2018
(Barcelona) 10 Dis 2018.Tababaraha kooxda Barcelona Ernesto Valverde ayaa xaqiijiyay in weeraryahankiisa reer Uruguay ee Luis Suarez uu seegi doono kulanka Champions League ay habeen dambe kula ciyaari doonaan Tottenham Hotspur garoonka Camp Nou.
Ernesto Valverde ayaa kasoo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka habeen dambe ee Tottenham Hotspur wuxuuna ka hadlay dhowr arimood muhiim ah.
“Waxaa jira isbadal badan aan ku sameyn doono kooxda kadib kulankii Catalan derby, Tottenham waxay ku soo gali kartaa shaxdeeda rasmiga ah, balse anaga ma awoodno inaan sidaas sameyno, tusaale ahaan Luis Suarez wuxuu dareemayaa xanuun, mana ciyaari doono sababtoo ah ma dooneyno inuu halis galo”.
“Arinta ku saabsan Lionel Messi, berri waxaan ku dhawaaqi doonaa ciyaartoyda rasmiga ah ee kulankan ka qeyb gali doonta, waxaadna ogaan doontaa wax walba”.
“Arthur Melo wuu fiican yahay ma aanan dooneynin inuu ciyaaro kulankii Espanyol sababa la xiriira awooda kulanka”.
“Waxaan dooneynaa inaan u ciyaarno kulankan si aan u guuleysanno, iyada oo aan loo eegin inaan u gudubnay xili hore wareega xiga ee 16-ka, sida dhacday xili ciyaareedkii hore, waan soo baxnay heerka group-yadana waxaan kaga dhameesanay guul, waxaan la ciyaari doonaa koox adag, waxaana dooneynaa inaan guuleysano”.
“Kulanka Napoli wuxuu inooga muhiimsan yahay xitaa hogaanka Premier League” - Klopp